Igumbi elihle elinesibini kwikhaya elinobuhlobo - I-Airbnb
Igumbi elihle elinesibini kwikhaya elinobuhlobo
Indawo yam ikufutshane nombindi wesixeko, iipaki, ubugcisa kunye nenkcubeko, iimbono ezintle, kunye neendawo zokutyela kunye nokutya. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yobumelwane, ukukhanya, ibhedi epholileyo, ikhitshi, ubumnandi kunye nomoya opholileyo esizama ukuwudala. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, abahambi beshishini, amaqela amakhulu. Sikufutshane nePlymouth Hoe, iBarbican
Kwakhona, ilungele amakhonkco kaloliwe, isibhedlele saseDerriford, kunye nePlymouth Uni.
Le yindawo ezolileyo kakhulu, ejikelezwe ziipaki kunye nokuhamba nje imizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wesixeko.
Kukho indawo yokupaka esitratweni ngaphandle.I dont drive my self ke andazi ukuba kulula kangakanani na ukupakwa, kodwa indawo yayo yokupaka yasimahla. Sikwindlela yebhasi, kuzo zonke iindawo zasePlymouth, eDerriford nakwiindawo ezingaphandle.
Kananjalo sinegumbi elinye kunye negumbi losapho, elilala i-4 ekhoyo kunye nebhedi eyongezelelweyo ye-z enokubekwa kwigumbi lakho ukuba iyafuneka. Nceda ubuze nje malunga nokufumaneka
4.81 out of 5 stars from 252 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-252
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi252
IPlymouth sisixeko esiphithizelayo, nesidlamkileyo esinomda wamanzi okumgangatho wehlabathi. Ngokubhekiselele kulonwabo lwenkcubeko, intlalo kunye nokusingqongileyo yinto yesibini. sikufutshane namabala ebhola ekhatywayo kunye neziko lokuphila, ilali yaseStoke kunye neepaki ezininzi zokuhamba kwezinja.